Inqaku leRedmi 8 liza kumiliselwa kwilizwe liphela | I-Androidsis
UXiaomi uqinisekisa ukuba iRedmi Qaphela i-8 iza kuphehlelelwa kwilizwe jikelele
Inqaku leRedmi 8 laziswa ngokusesikweni ngo-Agasti, ecaleni kweNqaku 8 Pro. Iimodeli ezimbini ezintsha phakathi kuluhlu oluphakathi lweshishini laseTshayina, ezinazo zonke izithako zokuba yeyona nto ithengiswayo kwintengiso. Nangona ukuza kuthi ga ngoku kuphela yimodeli yePro esele ithengisiwe kwintengiso yamanye amazwe, phakathi kwabo eSpain. Kodwa akukho nto yaziwa ngayo imodeli eqhelekileyo.
Ke ngoko, abaninzi bayoyika ukuba le Redmi Qaphela 8 ayizukumiselwa ngaphandle kweAsia, kodwa kubonakala ngathi ayizukubakho. UXiaomi uqinisekisa ukuba le modeli Izakuthengiswa kwintengiso yamanye amazwe. Ukongeza, inkampani sele iqala ukukhuthaza esi sixhobo kwintengiso yamanye amazwe.
Ngelo xesha akukho mihla yokukhululwa okanye iinkcukacha ezingakhange zinikwe yeRedmi Qaphela 8 kwintengiso yamanye amazwe. Into elungileyo kukuba kuyaqinisekiswa ukuba kungekudala siza kuba nakho ukuthenga le modeli kwiimarike ezinje ngeSpain. Into ebilindelwe ngabaninzi, kuba iboniswa njengenye yezona zixhobo ziphakathi kuluhlu.
Umzali umzali izakuba sisindululo esilandelayo sophawu lwesiTshayina. Ke ayisiyonto ekufuneka ukuba ithathe ixesha elide ukuba yenzeke, ngokuqinisekileyo ukuwa oku kuya kuba nakho ukuthenga le fowuni ngokusemthethweni kwiimarike ezinje ngeSpain.
Olu luhlu luphakathi kwinqanaba elitsha lophawu lwaseTshayina lushiye neemvakalelo ezilungileyo. Inqaku leRedmi 8 linikezelwe njenge ifowuni elungileyo phakathi kuluhlu oluphakathi. Ineekhamera ezilungileyo, uyilo olulungileyo, ngaphezulu kokusebenza okwamkelekileyo, kunye nebhetri elungileyo. Iyahambelana kakuhle nezinto ezifunwayo ngoku.
Abasebenzisi abaninzi bajonge phambili ekusungulweni kwayo kwintengiso yamanye amazwe. Ngokukodwa ukusukela eli nqaku leRedmi 8, njengezinye iifowuni zohlobo, izakusishiya nexabiso elifikelelekayo. Ngaphandle kwamathandabuzo, le yinto eya kuthi isebenze egameni lakho ekusungulweni kwayo kwilizwe liphela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Xiaomi » UXiaomi uqinisekisa ukuba iRedmi Qaphela i-8 iza kuphehlelelwa kwilizwe jikelele
Imisonto: Inkqubo yemiyalezo ye-Instagram
IMoto E6 Plus yaziswa ngokusesikweni eSpain